Xildhibaano Sheegay in Xukuumada Farmaajo aysan kasoo bixin Ballanqaadyadi ay sameysay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Xildhibaano Sheegay in Xukuumada Farmaajo aysan kasoo bixin Ballanqaadyadi ay sameysay
Tagged With: Baarlamaanka Federaalka, Farmaajo
Xildhibaano Sheegay in Xukuumada Farmaajo aysan kasoo bixin Ballanqaadyadi ay sameysay
March 8, 2011 - By: Abdirahman. A
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay qorshihi boqolka maalmood usoo bandhigay Raysalwasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxyar kadib markii loo magacaabay xilka Raysalwasaaraha.
Qaar kamid ah mudaneyaasha Baarlamaanka ayaa sheegay in ballanqaadyadii uu sameeyey Raysalwasaaraha aysan wax ka qabsoomin.
Xildhibaan Cabdi Cabdulle Siciid ”Jini Boqor” oo la hadlaayay warbaahinta ayaa sheegay in qorsheyaashas ay noqdeen kuwa aan qabsoomin isagoo xusey in mudo 100-maalmood ay wax laga qaban karin xaaladda ka taagan xilligan Soomaaliya.
Mudane kale oo ka tirsan Baarlamaanka ayaa sheegay in Xukuumada ay ku talaabsatay waxyaabo muhiim ah sida in ay la wareegtay xarumo muhiim ah oo ay ku sugnaayeen Xoogaga Al-Shabaab.
Raysalwasaare Farmaajo ayaa markii uu qabanaayay xilka wacad ku maray in Xukuumadiisa ay wax ka qaban doonto amniga isla markaana la wareegi doonto dhamaan gobolada dalka ee ay haystaan xoogaga kasoo horjeeda.
Dhowaantan Ciidamada Dawladda waxay la wareegeen degmooyin ka tirsan gobolka Gedo iyadoo sidoo kale magaalada Muqdisho kala wareegeen fariisimo ay ku sugnaayeen Shabaab.